Indawo yase-Afrika yeMfundolwazi neFilosofi yeSayensi
Indawo yase-Afrika yeMfundolwazi neFilosofi yeSayensi itholakala ngaphansi kweSigaba seFilosofi eNyuvesi yase-Johannesburg. I-ACEPS iqhubekisa izingxoxo phakathi kwamazwe ase-Afrika nomhlaba ezindaweni zeMfundolwazi neFilosofi yeSayensi ngokuletha ulwazi lwase-Afrika, imibuzo nemikhuba ukuba kube sezingxoxweni ezizwakalayo namanye amasiko efilosofi. Umsebenzi wethu wefilosofi wokuqala uhlelwe ngaphansi kwamaphrojekthi ongamele amathathu:
Izinhlelo Zolwazi Zomdabu;
Ezempilo Nemishanguzo e-Afrika; kanye
Siphishekele onke amaphrojekthi ethu anemiqondo yase-Afrika, ngokukhuthazela umsebenzi okhethekile ongowase-Afrika ngemvelo futhi obonakala kahle kuzinselele nokuthinta i-Afrika. Sikuthatha njengezindaba ezibalulekile, isazelo, imibono, imiqondo, imishikashika nokukhishelwa eceleni okuhambisana nalapho sibekwe khona, nokuthi lokhu kuchaza uhlobo locwaningo esilwenzayo.
Ukuqala kwethu ukuba ama-Afrika kufaka okuningi futhi akukona okwezenkolo, kodwa sinokuziqhenya okukhulu ngokuhlonipha nangokufunda ulwazi, lwabantu bakuqala abalulazwa ababethunywe amasiko nosikompilo. Siphokophelele ukuthuthukisa amakhono abalulekile okucabanga adingekayo ukuphonsa itshe esivivaneni ekukhiqizeni ulwazi ezwenikazi, endaweni yesimanje yomhlaba wonke nokumisa kahle inkulumo yomphakathi ikakhulukazi ngesayensi nefilosofi. I-ACEPS igqugquzelwa ubungqabavu namandla angawemvelo emoyeni wase-Afrika futhi siphokophelele ukulingisa lokhu kudlidlizela ocwaningweni nasekufundiseni kwethu.
Yini okwenza i-ACEPS ibe ngekhethekile?
Awungeke ukwazi ukuba ifilosofa ephapheme e-Afrika ngaphandle kokuqaphela lapho ukhona. Lokhu kuqwashiswa kunezimo eziningi: okomlando osanda kudlula ongenabulungiswa nokunqotshwa, komlando ojulile obuyela emuva lapho isintu savela khona, kumasiko angefani newakho (noma ngabe yini) kokuhlangana nokuhlukaniswa kwesifunda nemicabango yaso, nangaphansi kwako konke lokhu, kwamakhono amakhulukazi akhona.
Imbuyiselo yethu enkulu, ithuba esinethemba lokulisebenzisa kahle, lisekuthini singaphandle. Lokhu kunjalo ngokubuka umhlaba ngaseNyakatho, nasekubukeni okungaphansi okuhlala kungumakhonya esikhungweni semfundo e-Afrika. Lokhu kusinikeza ithuba lokugudluza lowo mbono..
Ukuthatheka kwethu kufilosofi ulwazi, lokho okukholelwa ukuba yiqiniso, izindlela zokwazi, izinhlobo zokuqonda, izindlela zokuthola nokuqinisekisa lokhu kanye nokwenza ngenkambiso elungile. Lezi yizindlela ezijulile lapho amasiko angangqubuzana khona, nasezindaweni lapho bangafundisana khona okukhulu. Lezi kubuye kube yizindawo lapho kuhlala kucatshangwa ukuthi kuncane kakhulu okunganikezwa yi-Afika, "ngendlela yempilo" ukuqonda okuwuhlobo oluvame kukokubili ukunikezwa nokulindelwe umhlaba wonke jikelele. Sizokhombisa lo mcabango njengoyiphutha. I-Afrika inganikeza umhlaba wonke kanye nayo ngokwayo, ukuqonda ngemfundiso yolwazi leyo engeke yafinyelelwa nanoma yikuphi lapha emhlabeni.
Ukuba yindawo ehola phambili kuFilosofi yeSayensi neMfundolwazi, leyo eletha imibono yase-Afrika neminikelo ekuqhameni komhlaba.
​Sizofinyelela kanjani lapho
Ngokukhulisa nokuthuthukisa ithalente eliselincane, ikakhulukazi elabampisholo base-Afrika, ku-Mfundolwazi nakuFilosofi yeSayensi.
Ukukhuthaza intshisekelo nokuqonda iFilosofi yeSayensi neMfundolwazi phakathi kwabafundi abangakatholi iziqu.
Ukuqeqeshela abenza kahle kakhulu abafundela iziqu eziphezulu emazingeni aphakeme kakhulu womhlaba jikelele.
Ukumisa amaphrojekthi ocwaningo asezingeni eliphezulu
Ukubona nokuthuthukisa ukuxhumana phakathi kokukhathazeka komdabu ezinhlelweni zolwazi lwase-Afrika neziqaqulula iMfundolwazi neFilosofi yeSayensi.
Ukukhipha imiphumela yocwaningo, ikakhulu ngokushicilelwa, ngewebhu nangamaphepha ezingqungqutheleni.
Ukubunjwa busha kwezindlela zokubandakanyeka kwezemfundo: ukususa uhlelo lobukoloni ezingqungqutheleni.
Ukuphatha inhlangano yolwazi ngesihloko esithile, izinkomfa, imihlangano nezikhungo zokusebenzela
Ukuletha ucwaningo oluvunyelwe, iseluleko nokumukisa ezinhlanganweni ezinentshisekelo
Ukumisa nokuthuthukisa isizinda solwazi mayelana nemithombo efanele yocwaningo
Ukwenza indawo exubile lapho abafundi nabaholi bamaphrojekthi bangakhula khona ngamakhono amalungu abalulekile wamasiko abo uma belokhu besebenzisana kahle namazwe omhlaba wonke.
Ukudala izizinda zokucwaninga nezindlela zokuxhumana ezibeka uhlelo ezizukukulwaneni zangomuso ezicabanga ngokuhlolisisayo e-Afrika nangaphandle